किन हिट भयो गलबन्दी? यस्तो भन्छन् गायक प्रकाश सपुत - Everest Dainik - News from Nepal
किन हिट भयो गलबन्दी? यस्तो भन्छन् गायक प्रकाश सपुत
काठमाडौंः युट्युबमा तहल्का मच्चाइरहेका छन्, प्रकाश सपुतले। दुई सातामै उनको लोकदोहोरी गीत ‘गलबन्दी’ ले ८० लाख भन्दा बढी दर्शक कमायो। वर्ष दिनअघि उनको ‘बोल माया’ गीत पनि यस्तै हिट बनेको थियो। आजको नेपाल साप्ताहिकले उनीसँगको अन्तर्वार्ता छापेको छ। त्यसको केही आंशः
गलबन्दीले कस्तो कथा भन्छ?
पहिले–पहिले गाउँघरतिर दिनभर काम गर्ने र साँझ रोधी बस्ने गरिन्थ्यो। संगीत हाम्रो संस्कार, चलन मात्र थिएन, भावनात्मक सम्बन्ध थियो। तीनरचार दिनसम्म रोधी चल्थ्यो। एउटा कालखण्डको त्यो कथा यसमा झल्काउन खोजेको छु।
लगातार गीत हिट हुनुको राज के हो?
मानिसलाई यथार्थपरक विषय मनपर्दोरहेछ। संसारभर यथार्थपरक चलचित्र, पुस्तक नै मन पराइन्छ। मेरा गीतमा पनि प्राकृतिक र मौलिक विषय भएकाले मन पराइएको हुनुपर्छ।
याे पनि पढ्नुस गायक प्रकाश सपूत ‘डिएनए क्लोथिङ’को ब्राण्ड एम्बेस्डर
लोकगीतले यति चर्चित बनाइदिन्छ भन्ने सोच्नुभएको थियो?
थिएन। बीचमा दोहोरी ब्याटल गाएँ। एउटै क्षेत्रमा सीमीत भएर मात्रै पुग्दैन भन्ने लागेको थियो। लोकगीत मेरो सपना थिएन। फिल्म खेल्ने इच्छा थियो। कथामा रुचि राख्थें।